Zeziphi Abarhwebi abanokuzifunda kuPhando loTshintsho lukaDell's IT? | Martech Zone
Zeziphi Abarhwebi abanokuzifunda kuPhando loTshintsho lukaDell's IT?
NgoLwesine, Aprili 27, 2017 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 28, 2017 Douglas Karr
UDell uchaza iTekhnoloji yoLwazi inguqu njengenkqubo yokuphucula ulwazi kunye netekhnoloji yoqhakamshelwano ukuze kwenziwe ubomi babantu bube nokusebenza ngakumbi nangcono. Inguqu ye-IT ikwagxile ekuphuculeni iziseko zophuhliso ukukhuthaza ukusebenza kakuhle kweenkqubo ngenxa yokuncitshiswa kwenkcitho yezixhobo.
Kudala ndisebenza kunye UMark Schaefer kunye nomthengi wakhe, iDell Technologies, kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo zokupapasha ii-podcast ezibonelela ngengqondo kubantu abaqhuba i-IT Transformation kunye nophando olumangalisayo olujikeleze intshukumo. I-podcast ibizwa Izibane.
Inguqu ye-IT ibaluleke kakhulu ekujongeni eyona ndlela intle yokudibanisa itekhnoloji kwiinkqubo zakho zeshishini, yintoni ephume ekusebenziseni kwayo, ukuba ishishini lakho liziqhelanise njani notshintsho kwitekhnoloji, kwaye ukuba ishishini likwazile ukutshintsha njani ngokusebenzisa i-informatics .
Uguquko lweeNqobo eziPhambili zoTshintsho
Njengoko uDell wayehlalutya ukuba luyintoni utshintsho lwetekhnoloji yolwazi, babuza uthotho lwemibuzo, kuba zibekwe ngcono ukusinceda siphendule imibuzo ebalulekileyo. Uninzi lwale micimbi lujolise kwiinkampani ezithembele kuguquko lwayo kwaye zenzelwe ukuvavanya inqanaba lempembelelo le ngcamango inempumelelo ngayo kula maziko. Le mibuzo iquka: -
Uhlobo lwetekhnoloji olusetyenziswa ikakhulu kwinkampani yakho
Uhlobo lwenkqubo ekhoyo esetyenziselwa ukuqhuba ishishini lakho
Ubume beenkcukacha ezisetyenziselwa ukuphuhlisa ezi nkqubo
Kwaye loluphi ulwazi lwetekhnoloji olusetyenzisiweyo kwishishini lakho.
Kwakhona, uDell ujonge izibonelelo ezinokuthi zize notshintsho kwi-IT kwishishini lakho oko waqalisa ukuyisebenzisa. Ngelixa uninzi lweenkampani ziphumelele ekusebenziseni le ndlela, ezinye azikhange zikwazi ukuziqonda izibonelelo ezizeleyo zokusebenzisa inguqu yetekhnoloji yolwazi. Ukusuka kuphando olwenziwe, kuyacaca ukuba uninzi lwamashishini lukwazile ukuyibona i-IT Transformaton kwaye isendleleni yokutshintsha.
Izibane ezikwisiqendu se-01: Silungile, setha, Guqula… i-IT yakho
Inqanaba lotshintsho lwe-IT inkampani eyiphumezileyo inefuthe elikhawulezileyo nelibonakalayo kuhlumo lweshishini, umahluko okhuphisanayo kunye nokukwazi ukwenza izinto ezintsha. Yimalini? Abahlalutyi bamashishini abaphambili be-IT benze uphando kwaye baneempendulo ezimangalisayo. Ubude bexesha: 34:11
Amashishini aphumelele kakhulu namhlanje aneempawu ezintathu ezizodwa. Okokuqala nokuphambili, baye bakwazi ukukhuthaza ukusetyenziswa kwetekhnoloji kuyo yonke imisebenzi yabo. Okwesibini, beze nenkqubo eyahlukileyo ekwaziyo ukusebenzisa ubuchwepheshe bolwazi ngeyona ndlela isebenzayo. Kuba ukuguqulwa kwe-IT kwenzelwe ukukhulisa imveliso yeshishini, iinkampani ezisebenzisa le ngcinga zinazo
Ukusukela ukuba iinguqu ze-IT zenzelwe ukukhulisa imveliso yeshishini, iinkampani ezisebenzisa le ngqondo ziye zafunda ukuzilungelelanisa namafu e-intanethi ukuze kwandiswe imveliso. Okokugqibela, iinkampani eziphumeleleyo zikwazile ukwenza inkqubo yetekhnoloji yolwazi ekulula ukuyisebenzisa kwaye igcina bonke abasebenzi kwelo ziko. Amashishini aguqulwe ngokupheleleyo akhuthaza unxibelelwano olufanelekileyo olunqumla phakathi kwamanqanaba ohlukeneyo olawulo ngaphakathi kwenkampani ethile.
Ngaba isantya siBalulekileyo kuTshintsho lweDijithali?
Ewe. Uninzi lwamashishini namhlanje athatha utshintsho lwetekhnoloji yolwazi ukuze zibekwe ngcono kuphuhliso lweemveliso ezintsha kunye neenkonzo phambi kwabakhuphisana nabo. Owona msebenzi uphumeleleyo namhlanje baye bakwazi ukwakha usetyenziso olomeleleyo ngemicimbi yeentsuku nje, ii -apps ezizinzileyo kangangokuba abafane bafumane iingxaki zolondolozo.
Inguqu ye-IT incedisile ukukhulisa imveliso yamaziko amaninzi. Ukuza kuthi ga ngoku, amashishini asebenzisa itekhnoloji ayakwazi ukwenza iiprojekthi zawo ngokukuko kunye nokuhambisa iziphumo ngaphambi kweshedyuli. Yiyo loo nto inguqu ye-IT iyintsikelelo yokuzifihla kumashishini amaninzi.
Ukusukela ekuqaleni, kubonakala ngokwaneleyo ukuba inguqu ye-IT iyimfuneko kwimpumelelo yeshishini lakho. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba ukhethe ukusebenzisa olo hlobo lutsha, kuya kufuneka uqale wenze uphando olunzulu lomphefumlo ukuze uza nesizathu sokuqala sokuba kutheni ukholelwa ukuba inguquko yetekhnoloji yolwazi izakuzisa inzuzo eninzi kwiqumrhu lakho.
Gcina imali eninzi kwimveliso ezintsha ukuze ube nakho ukwenza ishishini elinamandla, elinakho ukukhuphisana namanye amashishini ohlobo lwakho. Ungaqala umncinci, kodwa ukuba usendleleni elungileyo, ngokuqinisekileyo uya kuphelela ekubeni yinkampani oza kubalwa nayo.
Banokufunda ntoni abathengisi kuTshintsho lweIT?
Abarhwebi kufuneka batyale imali kwitekhnoloji yokuthengisa ethoba ixesha kunye nemali, ngelixa lisonyusa ixabiso lomsebenzi ophunyeziweyo. Oku kuyakubonelela ngenzuzo eza kuthi inyuse ifuthe lokuthengisa kwakho ngelixa unciphisa ixesha elichithwe ukwenziwa. Olo londolozo emva koko lunokuba sisiseko sotyalo mali oluza kuguqula ishishini lakho.
Rhuma kwizikhanyiso kwi iTunes, Spotify, okanye nge Ukondla iPodcast.
tags: dellezobuchwephesheitinguquyintoni inguquko